अवार्ड नपाएपछि बिचबाटै उठेर हिँडे शाहिद ! - लोकसंवाद
अवार्ड नपाएपछि बिचबाटै उठेर हिँडे शाहिद !
काठमाडौं । यहि वर्ष रिलिज भएको शाहिद कपुर स्टारर चलचित्र ‘कबिर सिंह’ बक्स अफिसमा निकै सफल भएकाे मानिन्छ।
उनको अभिनयलाई लिएर दर्शकले मन खोलेर प्रशंसा समेत गरेका छन् । शाहिदको फिल्मी करीयरमा यस चलचित्र अर्को कोशे ढुङ्गा साबित भएकाे अनुमान गरिएकाे छ । सबै हिसाबले सफल भएको चलचित्रले अहिलेसम्म एउटा अवार्ड पनि हात पार्न भने सफल भएकाे छैन ।
हालै भएको एक अवार्ड समारोहमा शाहिदले अवार्ड नपाएपछि कार्यक्रम नसकिदैं बिचबाटै उठेर हिंडेका थिए भन्ने खबर सार्बजिनक भएकाे छ । अवार्ड समारोहमा शाहिद परफर्मेन्स पनि गरेका थिए । तर स्टार स्क्रिन अवार्डस २०१९ मा उत्कृष्ट अभिनेताको उपाधि 'गली ब्वाई' बाट रणवीर सिंहले प्राप्त गरेका थिए । रणवीर सिंहले अवार्ड पाउने बित्तिकै शाहिद कार्यक्रम छोडेर गएका थिए ।
शाहिदले कार्यक्रम छोडेर हिँडे पछि उनको ठाउँमा अभिनेता वरुण धवनले प्रस्तुति दिएका थिए ।
बाल गायक अग्रजलाई 'मेरी आमा’ बोलको गीतमा प्राज्ञ शान्तिरामको साथ (भिडियोसहित)
डीपी दाहालकाे मायाको घरबार नामको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
विक्रम बरालको स्वर स्वरको ‘भन्थे बाजेले....’ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)